Iyo macOS 10.12.3 vhezheni yave kuwanikwa kune vese vashandisi | Ndinobva mac
Iyo macOS 10.12.3 vhezheni yave kuwanikwa kune vese vashandisi
Apple ichangobva kuburitsa yepamutemo vhezheni yeese macOS 10.12 vashandisi.3 uye ndeyekuti kana svondo rapfuura isu takapera beta vhezheni yevagadziri, vhiki rino rakasarudzwa neApple kuvhura vhezheni itsva. Mune ino kesi inoshandura mukuvandudza kunoitwa mune dzakapfuura beta shanduro, mhinduro yemamwe mabugs uye kururamisa kwemakanganiso. Sezvakamboita shanduro dzekare dzeMacOS Sierra, kambani inowedzera dzimwe shanduko maererano nemashandiro ehurongwa, asi zvakanyanya vanoisa pfungwa pakuvandudza mashandiro uye kugadzirisa madhigi.
Iyi vhezheni nyowani ichawedzera mashoma maficha maringe nemabetas asi mune yapfuura beta vhezheni kwaive nezvinhu zvitsva senge mapikicha, emoji nyowani kana kupokana kwekubvisa kwe yasara bhatiri nguva yeMacBooks, chimwe chinhu chisina kugara zvakanaka nevashandisi. Chero zvazvingaitika, iyo nyowani vhezheni vhezheni yaisazounza shanduko huru kana tikataura nezve mashandiro, asi kana iri mune yekugadzirisa zvikanganiso uye nevamwe sezvo ivo vachiwedzera solution kukundikana kwemifananidzo yeiyo nyowani MacBook Pro 2016, mhinduro yezvikanganiso nemaPDF uye mhinduro kune kuchinjiswa kwemafaira nevechitatu-bato kunyorera pakati pezvimwe zvakagadziridzwa.
Unogona kuwana iyi nyowani nyowani zvakananga kubva kuMac App Store mune iyo yekuvandudza tebhu, asi zvinokwanisika kuti mumaminetsi aya mushure mekutanga kurodha pasi kwakazara, saka rugare rwepfungwa kana tichida kugadzirisa Mac yedu. Chero zvazvingava, kurudziro ndeyekuisa vhezheni iyi nekukurumidza sezvazvinogona kuti unakirwe kururamisa uye kumwe kugadziridzwa kwakaitwa, kunyangwe zvisiri zvekushandisa zvevashandisi kana shanduko yesystem.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Iyo macOS 10.12.3 vhezheni yave kuwanikwa kune vese vashandisi
Ivo vanogona kudoma hongu. Inoenderana neshanduro dzese dze mac's
Pakupedzisira Apple inoburitsa iyo yekuvandudza yeApple Watch, watchOS 3.1.3
Tim Cook akatengesa makumi matatu ezviuru anosvika madhora zviuru mazana matatu nematanhatu